Izindaba Umake "Ukuvakasha nezindawo" - ULLER
Thola imikhondo yemvelo ehamba phambili futhi ebabazekayo yomkhondo ogijima eSpain. Uhambo olusuka enyakatho yezwe lethu, luwela iziqongo zaseYurophu futhi luhlola ngisho nezimangaliso zaseMallorca naseziQhingini zaseCanary, lapho ingcebo yamathafa ahlinzekwa yile mizila izoba yinhle kwezemidlalo yangaphandle futhi ijabulele ukuxhumana nemvelo.
Uma uthanda i-MTB noma ucabanga ukukukhuthaza ukuthi uqale, kulokhu sikushiya nemizila eminingi ye-MTB kuwo wonke amazinga eMadrid naseBarcelona, ​​kanye nomhlahlandlela walokho ozokudinga ukuthi ukulungele futhi uphephe Qhubeka ufunde!
Izigodi ziwumthombo wokhuthazo! Ukwakheka nokwakheka kwayo kumangalisa ngendlela emangalisayo ngoba sibona imvelo isebenza kubo bonke ubukhazikhazi bayo. Ngoba ubungazi, izigodi yizindawo ezinhle ezenza iplanethi yethu ibe yindawo emangalisayo yokuthokozela nokuqala uhambo olusha. Funda futhi uthole izigodi ezinhle kakhulu emhlabeni wethu!
Ngabe iAran Valley edumile izwakala njengeFreerider Aymar Navarro odumile kusuka? Impela! Intengo yesigodi etholakala ePyrenees, ikakhulukazi esifundazweni saseLleida, eCatalonia. Leli yinhloko-dolobha ye-Aran Valley futhi cishe abantu abangama-50% bakulesi sifunda bahlala lapha. Yindawo ethule futhi ebukekayo, egcwele izinto ongazivakashela. Lapha siyithola bese sikutshela okufanele ukwenze lapho!
Abalandeli bazilungiselela izibuko ze-snowboard ukujabulela ngokugcwele i- ski isizini Chofoza lapha bese uthola ukuthi yimaphi amathrekhi amangalisa kakhulu eYurophu! Ingabe usuyazi vele ukuthi yikuphi okuthandayo kakhulu?
Ingabe usuvele unesiqiniseko sokuthi iyiphi indawo oyithandayo yeqhwa? Noma kungani ungazami kuzo zonke lezi ezinkulu esizincomayo? Phuma ku-ajenda bese uhlela ukuthi ubalekele eqhweni. Izinkulungwane zezigigaba, ukweqa, ama-pirouettes nama-descents akulindile eziteshini ezahlukahlukene ze-Peninsula. Futhi ungakhohlwa ukuletha imaskhi yakho ye-ski!
Shelelela ezansi emithambekeni yeColorado nase sthola umoya omusha lapho ushushuluza Ukukhululeka kwayo okumangalisayo akunakuqhathaniswa. Ufuna ukufunda kabanzi ngokuhlangenwe nakho kokushushuluza kweColorado? Funda futhi uthole izinga le-adrenaline elinikezwa yile ndawo emangalisayo!